Rastrabani.com | रिमा विश्वकर्मालाई यसरी दलियो कालो मोसो ! (हेर्नुहोस् भिडियो) - Rastrabani.com रिमा विश्वकर्मालाई यसरी दलियो कालो मोसो ! (हेर्नुहोस् भिडियो) - Rastrabani.com
रिमा विश्वकर्मालाई यसरी दलियो कालो मोसो ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं । उच्च जातीको आफ्नो छोरा विवेकले तल्लो जातीको यूवती रिमा विश्वकर्मासँग प्रेम गरेको झोकमा विवेक सिंह ठकुरीको पीताले रिमालाई कालोमोसो दलिदिएका छन्। विवेकको पिता कृष्णले उनका सहयोगीहरुको सहयोगमा रिमालाई सार्वजनिक रुपमा कालो मोसो दलिदिएका हुन्।